Shanghtin: Email Virus Langai Pru wa ai lam..
Email Virus Langai Pru wa ai lam..
Sunday, August 17, 2008 | Laika Ka Ai Shanghtin
Myen mung Bung Kyi ni hpe makawp maga na matu Tibet BungKyi ( DalaiLarma) wa ah shi ga hpe lakap let shabra dat ai virus langai ahlam..Email kaw lawm chye wa ai virus langai ah lam myenblog ni kaw na mu hti na garan gachyedat ai hku re lawu kaw matut hti la gaw myit lawmjang...
ဒီဗိုင်းရပ်စ်ကို နအဖက ငှားရမ်းထားတဲ့ ရုရှက ကွန်ပြူတာ ဟက်ကာများက ဖြန့်ဝေတယ်လို့ ယူဆပါတယ်. မကြာသေးခင်ကပဲ ကျွန်တော့်ရဲ့ မိတ်ဆွေတစ်ချို့ သူတို့ရဲ့ Email ကို ၀င်ကြည့်ခံရတယ်လို့ သတိပေးပါတယ်. ဒါဟာ မြန်မာဘလော့ဂါတွေကို အစီအစဉ်ကျကျနဲ့ ဖျက်ဆီးလိုတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ လုပ်ဆောင်နေတာ သိသာထင်ရှားပါတယ်. ဒီသတင်းကို နီးစပ်ရာ ဘလော့ဂါတွေနဲ့ မျိုးချစ်မြန်မာလူငယ်များကို လက်ဆင့်ကမ်းပေးကြပါလို့ မေတ္တာရပ်ခံပါတယ်.